888Sport, manao filokana ara-panatanjahantena avy amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Mihamaro ny mpampiasa ampirisihina hanao filokana. Izy io dia fomba iray tena mitombina hahazoana fidiram-bola fanampiny ary misaotra ilay fampiharana 888Sport, azontsika atao ny mametraka filokana amin'ny iPhone mihitsy.
Ity fampiharana manokana ity dia manome antsika ny fahafaha-manao mametraka filokana amin'ny taranja fanatanjahantena marobe (baolina kitra, tenisy, basikety, formule 1 ary moto), na aiza na aiza firenena misy ny lalao na ny vola lehibe. Tsy olana izany ao ny fampiharana 888Sport.es.
Misy antsipiriany iray lehibe tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohana filokana ary izany dia raha vao alaina ny fampiharana 888Sport dia mila mamorona kaonty mpampiasa ianao. Azonao atao izany amin'ny fampiharana ihany na raha tianao dia azonao atao ny miditra amin'ny tranonkala ofisialin'ny serivisy filokana ary misoratra anarana avy eo. Ny iray amin'ireo safidy roa dia manan-kery, ankoatr'izay, manome valisoa ny fisoratana anarana amin'ny fanomezana an-tserasera ny orinasa amin'izay dia ataontsika maimaimpoana ny filokana voalohany.
Avy any, afaka manomboka ianao apetraho ny filokana tokana na mitambatra Ary raha mandresy valisoa ianao dia hanana fomba maro isan-karazany amin'ny fametrahana na famoahana ny loka. Ilaina indrindra izany mba hahafahana mampiditra ny vola amin'izay tadiavintsika ary tsy manohy miloka mandra-pahafatintsika ny zava-drehetra.
Raha fintinina, miaraka amin'ny rindranasa 888Sport dia hankafizinao ireo fiasa rehetra amin'ny tranokala filokana fa namboarina tamin'ny iPhone mba manolotra ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra azo atao.
Raha tianao ny tontolon'ny filokana na te-hanandrana ny vintanao amin'ny fanomezana soa atolotra amin'ny fisoratana anarana amin'ny 888Sport, azonao atao misintona ny fampiharana ofisialy ho an'ny iOS amin'ny alàlan'ny fanindriana ity rohy manaraka ity:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » 888Sport, fampiharana iray hanaovana filokana amin'ny iPhone
azo ampiasaina any ivelan'i Espana ve izy io?
Ohad Zafrir dia hoy izy:
Any Espana ihany
Mamaly an'i Ohad Zafrir